एउटा मौन आवाज २ - के यो सम्भव छ? - पालना दृश्य
एनिम समीक्षा, शीर्ष छनौट र परिधान!
सम्भावित / आगामी रिलीजहरू
एउटा मौन आवाज २ - के यो सम्भव छ?
by लिली गार्सिया 10th डिसेम्बर 2020 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड मौन आवाज २ मा - यो सम्भव छ?
अवलोकन - एक मौन आवाज २
फिल्म "एक साइलेन्ट भ्वाईस" विभिन्न पुरस्कारहरुमा परिणत भएको छ र over बर्षमा यो रिलिज भएकोमा ठूलो मात्रामा प्रसिद्धि प्राप्त गरेको छ। यस चलचित्रले शुको नाम गरेकी बहिरा केटीको कथालाई अनुसरण गर्दछ जो शोयाको रूपमा उही विद्यालयमा मिल्छ, जसले उनी भिन्न छ किनभने उनीलाई बदमाश गर्न थाल्छ। ऊ विन्डो बाहिर उनको हानि एड्स फेंक गर्न को रूप मा जान्छ र पनि एक घटना मा उनको रगत बनाउँछ। बदमाश केवल Ueno, शोयाको मित्र र सम्भावित प्रशंसक द्वारा प्रोत्साहित गरिएको छ।
एउटा मौन आवाज २
धेरै दर्शकहरूले ट्रेलरबाट यस्तो महसुस गर्छन् कि यो एकतर्फी एक मार्ग प्रेम कहानी हो ती दुई पात्रहरूलाई समावेश गर्न, तपाई यस्तो सोच्न सक्नुहुन्छ कि यो छुटकारा वा क्षमाको बारेमा हो। त्यसोभए के यो धेरै मनपराएको चलचित्र दोस्रो पटक हामीलाई एक साइलेन्ट भ्वाईस २ दिन फर्काउँछ? यस लेखमा के भइरहेको थियो त्यो हो।
मुख्य कथा - एक मौन आवाज २
एक साइलेन्ट भ्वाईसको मुख्य कथन शाउको नामकी बहिरा केटीको कथालाई अनुसरण गर्दछ जसलाई स्कूलमा बदमाशी गरिन्छ किनभने ऊ आफ्नो अशक्तताको कारणले फरक देखिन्छ। कथाको सुरूमा उनले अरू विद्यार्थीहरूसँग पुस्तकमा प्रश्नहरू लेख्ने र शाउको मार्फत आफ्ना प्रतिक्रियाहरू लेखेर संवादको लागि नोटबुक प्रयोग गर्छिन्। सुरुमा यो यूनो जसले उनको नोटबुकका कारण शोकोलाई हाँसोमा उडाउँछिन्, तर पछि शोए, उनोको साथी शाउक बदमाशीको साथ सामेल हुन्छन्, शौकोलाई उनको श्रवणशक्ति चोरी गरेर बेवास्ता गर्दै। उनले बोल्ने तरिकाको पनि हाँसो उडाउँदछन्, किनकि शौकोले आफ्नै आवाजको आवाज सुन्न सकिनन्। यो सबै मौन भ्वाइस २ को सम्भावनाको सर्तमा महत्त्वपूर्ण छ।
बदमाश जारी रहन्छ जबसम्म शौकोकी आमाले स्कूलमा औपचारिक गुनासो गर्न बाध्य पारिएको छ, बदमाश रोक्नको लागि। जब शोयाकी आमाले उनको व्यवहारको बारेमा थाहा पाए पछि उनी सुनको सहायताका लागि ठूलो रकम लिएर शोकोको घरतिर लाग्छिन्। शोयाकी आमा शोयोको तर्फबाट माफी माग्छिन् र आश्वासन दिन्छन् कि शोयाले शुकोलाई यस्तो व्यवहार फेरि कहिले गर्ने छैन।
शोयाले स्कूल छोडे पछि ऊ हाईस्कूलमा मिल्छ जहाँ उनी लामो समय पछि शौकोमा प्रवेश गर्छन्। यो थाहा छ कि उनले विद्यालय छोडेकी थिइन कि उनी शोयासँग भाग लिइरहेकी थिईन् किनभने उनी उनीसंग व्यवहार गरिरहेको थियो। यो सबै मौन आवाज २ को सम्भावनाको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। उनी उसबाट भागिन् र रुन्छिन्। यो मुख्यतया जहाँ कहानी सुरु हुन्छ, र विगतको बदमाशी स्कूल दृश्यहरू केवल विगतको दर्शन थियो।
बाँकी कहानी शोया सांकेतिक भाषा सिकेर र उनलाई बिस्तारै चेतावनी दिँदै शौकोलाई बनाउने कोशिस गर्दैछिन्। दुवैले सँगै धेरै चुनौतिहरूको सामना गर्नुपर्‍यो किनभने उनीहरू शोयाको साथी युनोले उपहास गरेका थिए किनकी उनी उनी र शौकोकी आमालाई बदमाशी गर्थे, जसले डोईलाई उनीहरूको नयाँ सम्बन्ध वा दुई सँगै भएको स्वीकार्दैनन्।
मुख्य पात्रहरू - एउटा मौन आवाज २
शोको निशिमिया साइड शोयाको साथ मुख्य पात्रको रूपमा काम गर्दछ। एक शिक्षक POv बाट यो स्पष्ट छ कि Shouko के सबै स्कूल मा गर्न चाहानुहुन्छ मा फिट छ र स्कूलको जीवनको मजा लिने र आनन्द लिन मा उनको साथी साथीहरु संग सामेल। Shouko चरित्र एक लजालु र दयालु एक हो।
उनी कसैलाई चुनौती दिन खोज्दिनन्, र सामान्यतया उनीहरुसँगै गीत गाउँदै फिट हुन कोशिस गर्छिन्। शौको धेरै मायालु चरित्र हो र धेरै हेरचाह गर्ने ढ acts्गले अभिनय गर्छन, जब उनी बदमाश र हाँसोको पात्र भएको देख्न गाह्रो हुन्छ। उनी एक मौन आवाज २ मा उपस्थित हुने छिन।
शोया इशिदा आफ्नै रुचिमा अभिनय गरेको देखिदैन र सामान्यतया सबैले के गरिरहेका छन् पछ्याउँदछ। यो धेरै जसो चलचित्रको पहिलो भागमा हुन्छ, जहाँ शोया शाउको बदमाशी गरिरहेकी छे। शोया आफ्नो परिपक्वता चरण सम्म आफ्नो कार्यको जिम्मेवारी लिदैन।
शोया चर्को ऊर्जावान र बेसी हो, शौको भन्दा ठीक उल्टो। ऊ धेरै चलाख हुँदैन, साधारणतया उसले भनेको कुराको अनुरूप। ऊ एक मौन आवाज २ मा देखा पर्नेछ।
उप पात्रहरू - एक मौन आवाज २
ए साइलेन्ट भ्वाईसका उप पात्रहरूले शोया र शुको बीचको कथाको प्रगतिमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, दुबै भावनात्मक सहयोग प्रदान गर्दै निराशा हटाउने तरिकाका रूपमा काम गरिरहेका थिए र रिस उठेका थिए। उप पात्रहरू धेरै राम्रोसँग लेखिएका थिए र यसले उनीहरूलाई धेरै सान्दर्भिक बनायो, साथै उप चरित्रहरू जस्तै उनेयो, जुन फिल्मको पहिलो आधा समयमा थोरै रकम मात्र प्रयोग गरिएको थियो धेरैमा थपियो र अन्तको नजिक गहिराई दिइयो।
मलाई यो फिल्मको बारेमा मनपर्‍यो र यसले प्रत्येक पात्रलाई धेरै महत्वपूर्ण र अविस्मरणीय बनायो, यो पनि चरित्र विकासको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो जुन चलचित्रमा सही रूपमा गरिएको थियो। तिनीहरू सबै सम्भवतः एक मौन आवाज २ मा देखा पर्नेछ।
"एक मौन आवाज" बाट सबै विशेष रूपमा प्रस्तुत उप पात्रहरू
मुख्य कथा जारी - एक मौन आवाज 2
चलचित्रको पहिलो भागले शोको र शोयाको विगत र उनले उनलाई बदमाश गरेको र पहिलो स्थानमा उनीसँग कुराकानी गरेको कारण देखाउँदछ। यो प्रकट भएको छ कि उनी केवल उनको साथी बन्न चाहन्थिन् र यसले कहानी अझ बढी भावनात्मक बनाउँदछ। स्कूलमा शौको र शोयाको प्रचार पछि पहिलो दृश्यले शाउको र शोया दुवैले एक अर्कामा भर्ना भइरहेको नयाँ स्कूलमा भागिरहेका छन्।
जब Shouko चिन्छ कि यो शोया उनको अगाडि उभिन् उनले भागेर लुक्न खोज्छिन्। पहिलो चलचित्रको मुख्य कथा एक मौन आवाज २ को सम्भावनाको सन्दर्भमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
शोया उनको साथ समात्छिन् र (साइन इन लैगौज) शिउकोलाई बताउँछिन् कि उनले पछि खेदेको कारण यो हो कि उनले आफ्नो नोटबुक छोडेकी थिइन। पछि शोया फेरि शौकोलाई भेट्ने कोशिस गर्छिन् तर उसलाई युजुरुले रोके र त्यहाँबाट जान भने। शोकाले शुकोलाई पुग्ने प्रयासको क्रममा यो पहिलो हो र बाँकी चलचित्रले अन्य सब प्लॉट र ट्विस्ट पनि मुछिएको छ र यसले धेरै रोमाञ्चक बनाएको छ।
हामी एक दृश्य देख्नेछौं? - एउटा मौन आवाज २
एक उत्तरकथा धेरै असम्भव हुन सक्छ र म यसको कारणहरूको व्याख्या गर्दै छु।
लेखकले अर्को कथा लेख्नुपर्नेछ शाउकु र शोया दुवैलाई।
कथा वयस्क हुडको सम्बन्धमा हुनुपर्दछ किनभने पहिलो चलचित्र ठूलो हुँदै थियो।
यदि उत्तरकथा उत्पादन कम्पनीले सिर्जना गरेको लागि पनि लाभदायक हुनेछ एउटा मौन आवाज.
यदि कलाकार समय मा एक राम्रो कथा संग आउन को लागी सक्षम छ।
यदि उत्तरक्रम मूल भन्दा राम्रो हुनेछ वा अझ राम्रो।
आशा छ हामी चाँडै केहि उत्तर पाउनेछौं तर अहिलेको लागि यो छ। एउटा साइलेन्ट भ्वाइस एक धेरै मन छुने फिल्म हो जुन केहि फरक विषयहरूमा कभर हुन्छ। र कहिलेकाँही हामी आवेगमा चीजहरू गर्छौं र त्यस पछि केहि बर्षहरूमा पश्चाताप गर्दै अन्त गर्दछौं। यो चलचित्र त्यस्तै निर्णयहरूको दृश्य प्रतिनिधित्व हो तर यसले मिक्समा विभिन्न भावनाहरूको एक राम्रो मिश्रण ल्याउँछ।
सिक्वेल कहिले रिलीज हुन्छ? - एउटा मौन आवाज २
हामी भन्छौ कि हामीले माथि छलफल गरेका सबै कुरा दिएका छौं र ती कारणहरूलाई पनि कि मौन आवाजले कुनै पनि समयमा २०२2023 र २०२ between बीचमा प्रसारण गर्नेछ। यो केवल अनुमान मात्र हो र यो सम्बन्धित कारणहरूसँग सम्बन्धित छ। आशा छ कि यदि नयाँ सामग्री लेखिएको छ हामी एक मौन आवाज सीजन 2024 देख्नेछौं, तर अहिलेको लागि हामी यति मात्र भन्न सक्छौं।
Scum's विश सीजन2- प्रिमियर मिति + समाप्ति व्याख्या गरियो
सम्भावित र आगामी रिलीजहरू
Hyouka - के एक मौसम2सम्भव छ?
Quintessential Quintuplet - सीजन2प्रीमियर मिति
किन कालो लगुन सिजन get प्राप्त गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ
GANGSTA। - किन एक सीजन २ सम्भव छ
कालो लगून - किन aतुको सम्भावना छ, र समय यो प्रिमियर हुनेछ
हाजिमेट कुनै गला - सीजन २ सम्भावित प्रिमियर मिति
मित्र यो इमेल क्लिक (नयाँ विन्डो मा खुल्छ)
टैग: मौन आवाज asilentvoice2 asilentvoice2 sequel asilentvoicearticle asilentvoice moviesequel asilentvoicesequel
प्रकाशित लिली गार्सिया
लिली गार्सिया द्वारा सबै पोष्टहरू हेर्नुहोस्
यी पोष्टहरूमा प्रयोग भएको केही मिडिया आलोचना र समाचारको रूचिमा गरिन्छ। तिनीहरू कुनै अन्य मनोरमा हेर वा सोचेको होन भन्ने होईन र पक्कै पनि यी दुईमा कुनै पनि अन्य कोटीमा पर्नु होइन।
हामी कुनै पनि असुविधा हुनबाट जोगिन यो बिल्कुल स्पष्ट बनाउन चाहन्छौं किनकि हामी (cradleview.net) एक निजी अन्तर्राष्ट्रिय र गैर स्थायी-निवासी तटस्थ संस्थाको स्वामित्वमा छन् र स्वामित्वमा छन्।
यदि शंका हो भने तपाईंको ईमेल पठाउनुहोस्:
र तपाइँको सन्दर्भ "DMCA" को रूपमा राख्नुहोस्
हामी हाम्रो निर्णयको साथ २ hours घण्टा भित्र प्रतिक्रिया दिनेछौं र हाम्रो पक्षमा सबै आवश्यक कारवाही गर्नेछौं।
हाम्रो साइट घटना क्यालोरी
दिनभरि, 18th नोभेम्बर 2020 - चाँडै आउँदैछ: व्यापारिक सामान स्टोर
इमेल को माध्यम ले ब्लग को सदस्यता लें
यो ब्लग सदस्यता र इमेल गरेर नयाँ पोस्ट सूचनाहरू प्राप्त गर्न तपाईंको इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्।
२० अन्य सदस्यहरूमा सामेल हुनुहोस्।
क्र्याडल दृश्यका लागि लेखक बन्नुहोस्
यस साइटमा होस्ट गरिएका सबै छविहरू तेस्रो पार्टीहरूबाट आएका हुन् र कुनै पनि व्यक्ति वा समूहबद्ध कार्यको लागि आग्रह गर्दैनन्।
यदि तपाईं तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्ने वा कुनै मालिसियस तरिकाले प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने हामी जिम्मेवार हुँदैनौं। सबै छविहरू प्रतिलिपि अधिकारको विषय हुनसक्दछ त्यसैले सावधान रहनुहोस्।
CVS रातो समुराई डिजाइन टी-शर्ट £12.00 - £15.50
पुरुषको क्लासिक हान्या दानव शर्ट £15.00 - £20.00
सीवीएस हन्न्या डेमन चैम्पियन टोपी [Col रंगहरू] £20.00
महिला सीवीएस हान्न्या छोटो आस्तीन टी शर्ट £20.50 - £22.50
CVS Gangsta गर्ल डिजाइन टी-शर्ट £23.00 - £27.00
अघिल्लो प्रविष्टि Quintessential Quintuplet - सीजन2प्रीमियर मिति
अर्को प्रविष्टि पूर्ण धातु आतंक सीजन - - यो हुनेछ?
हाम्रो इमेल सूचीमा साइन अप गर्नुहोस्
सबमिट क्लिक गरेर, तपाईं साइट मालिक र मार्केटिंग, अपडेटहरू, र साइट मालिकबाट अन्य ई-मेलहरू प्राप्त गर्न साइट मालिक र मेलचिम्पसँग तपाईंको ईमेल ठेगाना साझा गर्न सहमत हुनुहुन्छ। ती ईमेलहरूमा सदस्यता रद्द लिंक प्रयोग गर्नुहोस् कुनै पनि समयमा अप्ट आउट गर्न।
प्रक्रिया गर्दै ...
सफलता! तपाईं सूचीमा हुनुहुन्छ।
उफ्! एउटा त्रुटि थियो र हामी तपाईंको सदस्यता प्रक्रिया गर्न सकेनौं। कृपया पृष्ठ पुन: लोड गर्नुहोस् र पुन: प्रयास गर्नुहोस्।
के तपाई २१ बर्ष भन्दा माथिको हुनुहुन्छ?